Nhau - Kudzora musimboti we otomatiki kuumbwa muchina
Control musimboti otomatiki Kuumbwa muchina
The otomatiki Kuumbwa muchina kunyanya adopts mhepo nevezera kuzvidzora uye hydraulic kuzvidzora. Zvese zviri zviviri kumanikidza kwemweya kudzora uye hydraulic kutonga ndezve nyaya yekudzora kwemvura. Naizvozvo, iyo yekumanikidza yekudzora nzira zvakare yakafanana neayo hydraulic control nzira. Iyo inoshandiswa mune zvehupfumi, machira, peturu, makemikari, simbi uye nyika kudzivirira zvinodhaka. Yakave ichishandiswa zvakanyanya muLingcheng. Iyo yekumanikidza yekudzvinyirira nzira ndeye yekudzora system chiuno dhizaini inoumbwa nemhando dzakasiyana dzemhepo yekumanikidza zvinhu (senge mweya compressors, masilinda, mhepo mota, mavharuvhu emhepo, mweya yekumanikidza yekuona matanda, nezvimwewo). Kuburikidza nemhepo yekumanikidza ekudzora mavhavha (senge kumanikidza ekudzora mavharuvhu, kuyerera kudzora mavharuvhu, nezvimwewo) Uye inongedzo yekudzora vharuvhu, nezvimwewo) kudzora uye kugadzirisa iyo yekumanikidza, kuyerera uye kwekutungamira bhuku remhepo yakamanikidzwa mune pneumatic system yekugogodza iyo pneumatic actuator mune pneumatic system kuti iite ishande zvakajairwa zvinoenderana nenzira yakatemwa.
Iyo yekumanikidza yekudzvinyirira modhi inogona kuganhurwa mumhando mbiri: inoenderera kutonga uye yepakati kudzora. Kazhinji mweya wekumanikidza vanodzora kazhinji vanoramba vachidzora mweya kumanikidza, iyo inogona kushandiswa zvirinani kudzora chinzvimbo, kumanikidza, kuyerera, mvura nhanho uye tembiricha
Munyika yanhasi uko tekinoroji iri kusimukira nekukurumidza uye simba riri shoma, kuvandudzwa kwetekinoroji yekudzora mweya inosungirwa kukurumidza. Nekuvandudzwa kwemaindasitiri, mashandisiro ayo achawedzerwawo zuva nezuva. Panguva imwecheteyo, mashandiro ayo anofanirwa kusangana nezvinodiwa zvekusiyana kweaerodynamics uye nekukurumidza kukurumidza kwemagetsi indasitiri. Munguva yakadaro yekuchinja, zvinofanirwa kuve zvakasiyana. Pfungwa yekuona kugadzira pneumatic tekinoroji, mweya kubira zvechizarira uye pneumatic system. Mune mamwe mazwi, zvakafanira kwete kungoita tsvagiridzo yezvinhu zvemweya pneumatic ivo pachavo kuti vasangane zvakasiyana zvinodiwa. Kuti uvandudze kuvimbika kwesisitimu uye kudzikisa mutengo, zvinodawo kuita isina-mafuta, kuchengetedza simba, miniaturization uye kudzikisira uremu. Iwo akakwirira mwero wekutonga uye kutsvagurudzwa kweiyo yakasanganiswa yekudzora tekinoroji inosanganiswa nemagetsi.
Richigadzirisa vachikanda chinu, Chinwiwa Mould Machine, Chinwiwa richigadzirisa, Semi-Automatic richigadzirisa Machine, Sandbox, Punch Out Muchina,